Rasaas ayaa ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Atlanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Rasaas ayaa ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Atlanta
Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dadku waxay gabbadaan
Waa maalin aad mashquul u ah hubinta ammaanka TSA ee Garoonka Caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson Atlanta Sabtidan ka hor toddobaadka safarka ugu mashquulka badan gudaha Mareykanka - Thanksgiving. Horeba tirada dadka socotada ah ee diiwaangashan ayaa u safraya fasaxa. TSA ayaa shalay sheegtay inay baaritaan ku sameysay in ka badan 2.2 milyan oo socdaal ah.
Rasaas goos goos ah ayaa ka dhacday koontaroolka ugu weyn ee ciidamada ammaanka ay ku sugnaayeen. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay dad dhulka jiifa, dhar iyo agabka gaarka ah oo daadsan dhulka. Qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa ayaa la daad gureeyay, qaarna waxaa la dhigay laamiga iyagoo boorsooyinkooda sita.
Waxa soo baxday in ay ahayd si shil ah oo ka soo baxay hub, ma aha toogasho firfircoon. Wax dhaawac ah lama soo sheegin.
Garoonka caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson ee Atlanta ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay. "Ma jirto wax khatar ah oo ku wajahan rakaabka ama shaqaalaha."
Waaxda Booliiska Atlanta waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u ogaan lahayd duruufaha ku xeeran dhacdada.
Wixii ka dambeeya, Duulimaadyada dhoofaya waxay ku jiraan albaabada, waxayna la kulmaan dib u dhac wax ka yar 15 daqiiqo, halka duulimaadyada imaanaya ay la kulmaan dib u dhacyo la mid ah, ayuu yiri Maamulka Duulista Hawada Federaalka.